Biyyoonni Afriikaa gama soorata daa'immanitiin galma misoomaa hinguutan - BBC News Afaan Oromoo
Bara 2030tti biyyoonni afriikaa kamiyuu soorata daa'immanii madaalawaa hambuuf galma misooma walitti fufiinsaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniin kaa'ame akka fiixaan hinbaafne qorannoon guddina daa'immanii irratti gaggeefaman lama mul'isan.
Galmi kunis kaayyoowwan dhaabbata motummoota gamtooman keessa tokkodha.
Qorannoowwan kuneen kaayyoo kan galmaan akka hingeenyi mul'isan illeen, biyyoonni afriikaa eddoon haalli fayyaa daa'immannii itti fooyya'e jiraachuusaa agarsiiseera.
Xiyyeeffannaan qorannoo kanneen inni mummeenis, guddina daa'immaniifi haguuggii barnoota dubartoota umurii dahumsaa keessatti argaman irratti ture.
Kunis sababii walitti dhufeenyi dhimmoonni kunneen du'aatii daa'immanii waliin qaban olaanaa ta'eefiidha.
''Dhimmoonni lamaan kunneenis uummatichi haala kam irratti fayyaa akka ta'eefi akka hintaane kan mul'isaniidha,'' jedhu qorataan fayyaa idil-addunyaa Yunivarsitii Waashingtoon Pirofessar Siimoon Haayi.
Qorannoon kun biyyoonni afriikaa kaayyoo kan galmaan hingaha yaa jedhu malees, gama rakkiina nyaata madaalawaa daa'immanii hiikutiin biyyoonni afriikaa saaraan gadiitti argaman, bahaafi kibbaa hedduutti fooyya'iinsi mul'achuusaa eeree jira.